ဟန်းစ် ဟာ့စ် ရေးသားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်တက်မည့် အစိုးရသည် ကြီးမားသော လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတို့တွင်လည်း ဘဏ္ဍာငွေ မလုံလောက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသို့ ကူးပြောင်းရေးမှာလည်း ပြီးဆုံးရန် လမ်းစမမြင်သေး။ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကိုလည်းလူ့မလိုင် အခွင့်ထူးခံများကသာ ဦးစီးချုပ်ကိုင် ထားကြသည်။ နိုင်ငံသားတို့၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှာ တိုးပွားပျံနှံ့၍သာ.
မင်းဇေယျာ ရေးသားသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဖားကန့်သို့သွားသောလမ်းသည် ကျွန်တော် သွားဖူးသမျှလမ်းများအနက် အဆိုးရွားဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုးရွားသော တောင်တက်လမ်းပေါ်တွင် ကိုးနာရီခန့် သွားပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျောက်စိမ်းဒေသသို့ ကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျောက်စိမ်းဒေသဟု လူသိများသည့် ဖားကန့်ဒေသသည် တရုတ်လူမျိုးများ တန်ဖိုးထားနှစ်ခြိုက်သည့် အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်စိမ်းများ ထွက်ရှိရာဒေသ ဖြစ်သည်။ တရုတ်စကားပုံတစ်ခုတွင် “ရွှေသည်.
မြန်မာဘာသာဖြင့် သတင်းစာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ထုတ်ဝေ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်အလုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် သတင်းစာတစ်စောင်ကို တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ဒေသတွင် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က စတင်ထုတ်ဝေနေသည်ဟု ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။
လှိုင်သာယာက မှောင်နဲ့မည်းမည်းမှာ သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ လိင်ပြောင်းလိင်လုပ်သားတချို့ကို တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – အင်ဒရေ မာလာဘာ ဖိစီးနှိပ်စက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့ မတော်မတရားပြုခြင်းတွေဟာ လိင်လုပ်သားတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါ။ သို့ပေမဲ့ တချို့ကတော့ အစိုးရသစ်လက်အောက်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ့် အချိန်တွေကို မျှော်လင့်လျက်ပါ။ ဂျော့ရှူဝါ ကာရိုး ရေးသားသည်။.
ကချင်လူမျိုး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ တန်းတူညီမျှမှု ရရှိရေး၊ လိင် တန်းတူညီမျှမှု ရရှိရေးတို့အပြင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးစသည်တို့ကို တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ၏ နောက်ဆုံး ကြိုးစားရုန်းကန်မှုမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စရပ် တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ အိုလီဗာ ဆလိုး ရေးသားသည်။ ကချင်လူမျိုး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ.